Mmiri ozuzo: Ebe 8 nwere oke mmiri ozuzo na uwa | Netwọk Mgbasa Ozi
Monica sanchez | | Climatology, Meteorology
Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-ele anya na mbara igwe na-eche mmiri ozuzo a na-eche ogologo oge, ndị ọzọ, ga-achọ ka anyanwụ na-ahụkarị n'igwe ojii. Ma, n'ezie, ị nwere ike iji ọnọdụ ihu igwe nke ebe ibi, mana nke bụ eziokwu bụ na »ọ dịghị mmiri ozuzo ka onye ọ bụla masịrị".
̀ chọrọ ịma ebe ndị ọ fọrọ obere ka mmiri ghara izo? Lelee ndepụta a.
3 Ugwu Khasi
5 Ugwu Waialeale (Hawaii)
7 Egwuregwu Milford
8 Ọhịa nke Borneo
9 Kedụ ka mmiri si ezo?
10 Mmiri ozuzo nke ebe okpomọkụ
11 Udu mmiri ihu igwe
Emi odude ke edere edere nke Colombia, a ọhịa ebe a na ebe okpomọkụ idụhe regesta ụfọdụ ebe pụrụ iche ego nke 13.000 milimita nke mmiri ozuzo kwa afọ. Ọ bụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe omume niile, mpaghara ụwa dum ebe mmiri na-ezo.
Akụkụ ụwa a bụ obodo ịkụ azụ dị na Colombia. Dabere na etelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọdịmma Mba nke Colombia, nkezi nke 12.892 milimita n'afọ. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana n’agbata afọ 1984 na 1985 mmiri na-ezo kwa ụbọchị. Ya bu na ha nile “dere mmiri” n’oge ahu.
Na steeti Meghalaya, India, ha anọghị n'azụ. A maara ebe a maka nsụda mmiri dị egwu ya na ahịhịa ya na-atọ ụtọ. Obodo Mawsynram, nke nwere nkezi nke 11.871mm, nke Cherrapunji sochiri anya, nke ndị bi ya ruru ihe dịka 10, nke nwere nkezi nke 11.777mm.
Na Equatorial Guinea, ndịda nke agwaetiti Bioko, anyị hụrụ Ureca. Na mmiri ozuzo kwa afọ nke 10.450mm na nke gbara oke ohia nke okpomoku, o doro anya na obu ebe ikiri onu igwe.
Ugwu Waialeale (Hawaii)
Inwe aha nke putara “mmiri n’ebute mmiri” anyị nwere ike ịmatata etu mmiri si ezo na mpaghara a. Ma ọ bụ kama, ọ bụ. Mmiri ka na-ezo oke mmiri, mana ụkọ mmiri amalitela ịmetụta ya. N'agbanyeghị nke ahụ, nnukwu ego ka edere: 9.763mm n'afọ.
Ọ bụ obere agwaetiti Japan nke dị na ndịda nke isi agwaetiti Kyushu. A maara ya dị ka "agwaetiti nke iju mmiri ebighi ebi", ebe ọ bụ na afọ ọ bụla na-ede n'etiti 4.000 na 10.000 mm nke mmiri ozuzo.
New Zealand nwere ike ịnya isi maka oke ala mara mma mara mma. Otu n’ime ha bụ Milford Track, nke dị na South Island. Kwa afọ na-edekọ n'etiti 6.000 na 8.000 mm.
Ọhịa nke Borneo
Oké mmiri ozuzo na-agba ọhịa nke Borneo. Kpọmkwem na oke ọhịa Gunung Mulu, n'etiti agwaetiti ahụ, ụfọdụ 5.000 milimita mmiri ozuzo kwa afọ.
Kedụ ka mmiri si ezo?
Ugbu a anyị matara ndị bụ ebe mmiri na-ezo na mbara ala, gịnị ka mma karịa ịchọpụta kedu ihe "ihu igwe ozuzo" putara iji nweta ihe ma ọ bụ obere echiche nke ihe ibi ebe ahụ, nke nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịga ebe ọ bụla mmiri mmiri. Ka anyị bịaruo ya nso:
Mmiri ozuzo nke ebe okpomọkụ
Emere ihu igwe a site n'inwe obere okpomọkụ n'elu 18ºC. Ha dị na mpaghara dị nso na Ecuador ma nwee ụdị atọ:
Equatorial: Na mmiri ozuzo bara ụba n’afọ niile, n’ebe a na-enwe ihu igwe a, anyị ga-ahụkarị oke mmiri ozuzo. Kwa afọ okpomọkụ dị n'etiti opekempe nke 20ºC na nke kachasị nke 27ºC.
Ebe okpomọkụ: Ọ na - adị n’etiti 10º na 25º nke ugwu na South latitude. Ihu igwe dịkwa ọkụ, ma n'adịghị ka akụkụ ụwa, na nke a enwere oge ọkọchị, nke bụ oge oyi.
Udu mmiri: na mmiri ozuzo bara ụba n'oge ọkọchị, udu mmiri na-emetụta ya. Ọ bụ udu mmiri kacha dị na mbara ala, mana ọ na-enwekwa oge udu mmiri. N'oge okpomọkụ na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ nke ukwuu, ebe oyi na-adịkarị nkụ.
Udu mmiri ihu igwe
Igwe mmiri ozuzo na-ezo bụ otu nke nwere ọnwa oyi nke nkezi okpomọkụ dị n'etiti 18ºC na -3ºC, na nkezi nke ọnwa kachasị ekpo ọkụ dị elu karịa 10ºC. Typesdị ihu igwe atọ dị iche iche bụ ndị otu a:
Osimiri: Ọ bụ mpaghara nke mmetụta nke sistemụ cyclonic dị n'etiti 35º na 60º latitude. A na-akọwa oge dị iche iche nke ọma.
Chinese: ọ bụ mgbanwe ihu igwe dị n'etiti udu mmiri na-ekpo mmiri na ebe okpomọkụ na-ekpo ọkụ. Ha na-enwekarị oyi. Oge ọkọchị na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ, ma oge oyi na-adị nwayọ ma na-ezo.
Mediterenian: Ọ bụ ọnọdụ ihu igwe nke mpaghara dị jụụ. Ọ dị n'etiti 30º na 45º latitude North na South. Ihe e ji mara ya bụ ịnwe oke ọkọchị oge ọkọchị; unwu mmiri nke na-akpali site na ịdịgide adịgide nke okpuru mmiri subtropical anticyclone. Winters dị nwayọọ. Mmiri ozuzo na-etinye uche na oge opupu ihe ubi na oge mgbụsị akwụkwọ.
Imaara na otutu mmiri zoro nelu uwa? Ndi ọmọdiọn̄ọ mbon en̄wen?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Ebe 8 ebe mmiri ozuzo adighi-ada ada
Achọpụtara m na ozi a na-adọrọ mmasị, mana na mpaghara Amazon mmiri ozuzo karịrị 4.000 mm. afọ.
na-adọrọ mmasị, mana na Panama enwere ebe nwere 6,000 mm kwa afọ
Mmasị, m hụrụ ihe niile metụtara okike n'anya.
Zaghachi Ingrid Facenda
Obi dị anyị ụtọ na ị nwere mmasị, Ingrid 🙂
Ndị mmadụ nwere data enwetara site na nha site na National Meteorological Service ma ọ bụ site na Mahadum Agronomy dị njọ bụ ndị na-akọ akụkọ ndị ahụ na eziokwu nke ndị ọrụ ihu igwe ahụ nyere na ndị tinye njikọ na ibe Internetntanetị site na ebe ha nwetara data iji nyochaa nke ahụ. data ndị ahụ dị adị.
Ọ bụrụ na edeghị data ndị a kọọrọ site na importantlọ Ọrụ Ọmụmụ Climate dị mkpa, ọ bụ data na-abaghị uru n'ihi na enweghị ike ikwenye ya.